Nin Kenyan Ah Oo Safar Uu Ku Tegay Soomaaliya Dartii Loogu Xukumay 10-sano Oo Xadhig ah | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Nin Kenyan Ah Oo Safar Uu Ku Tegay Soomaaliya Dartii Loogu Xukumay 10-sano Oo Xadhig ah
October 19, 2016 - Written by Mustafe Faro
Nairobi:(Hubaal)-Maxkamad ku taala dalka Kenya ayaa xukun ku riday muwaadin dalkeeda u dhashay oo lagu magacaabo Simon Karuga oo da’diisa lagu sheegay 32-jir, kaas oo lagu xukumay 10 sano oo Xabsi ah, kadib markii Maxkamadda ay ku eedeeysay in uu u safray gudaha dalka Soomaaliya. Ninkan ayaa la qabtay 13-ka bishii September la soo dhaafay, waxaana gacanta ku dhigay dadka deegaanka ee dhinaca Soomaaliya, kuwaas oo markii danbe ku wareejiyay booliska Soomaaliya, iyagana ay dib ugu sii wareejiyeen Ciidanka Kenya ee kusugan Mandheera.
Ninkan qareenkiisa ayaa sheegay in Simon uusan u socon Soomaaliya ee uu doonayay inuu ka shaqeysto magaalada Mandhera, laakiin garsooraha Maxkamadda ayaa ku cadeeyay in ninkani 8-KM gudaha Somaliya laga soo qabtay.
Qareenkii u doodayay wiilkani ayaa sheegay in simon uu raadinayay guri raqiis oo uu ka kireysto magaalada Mandhera maadaama xadka dhanka Kenya ay guryuhu aad qaali u yihiin.
Dowlada Kenya ayaa ninkani ku eedaysay inuu doonayay inuu ku biiro ururka Al Shabaab, sheegtayna in qof kasta oo kenyan ah una safraya dalka Soomaaliya ee aan heysan dal ku gal saxan, uu noqonayo qof u socda in uu ku biiro Al-shabaab laguna xukumi doono 10 Sano oo xadhig ah.